သူကြီးအလှူ ရွာသားကောင်းမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » သူကြီးအလှူ ရွာသားကောင်းမှု
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Aug 13, 2011 in Food, Drink & Recipes | 11 comments
Speical Fried Rice(ဘန်ကောက်ထမင်းကြော်)။ ။ကြက်သား၊ကြက်ဥ၊မုံလာဥနီ၊သခွါးသီး၊ပဲသီးစိမ်း….
၂။Pineapple Fried Rice (နာနတ်သီးထမင်းကြော်)
ဘန်ကောက် ထမင်းကြော် စားချင်တယ်။
ကြက်ကြော ကြွပ်ကြွပ်လေး ဆို သိပ်ကြိုက်တယ်။
ကားပွဲစားတန်းက ကြက်ကြော်ကောင်းတယ် ဆိုပြီး သူများ ၀ယ်ကျွှေးတာ စားလိုက်ရတယ်။
နောက်နေ့မှ သိရတယ် ကြက်ကြော် တတုံး ၃၀၀၀ တဲ့.. တော်ပြီ ကြိုက်တော့ဘူးလို့..
အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ကြက်ကြွပ်ကြော်စားတော့မယ်လို့ တွေးလိုက်တယ်။
Feel က ကြက်ကြော် ထမင်းကြော် တပွဲ ၁၇၀၀ ကြက်ကြော် သိပ်ကောင်းတယ် ကြွပ်နေတာပဲ။
( အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ကြက်ကြွပ်ကြော်စားတော့မယ်လို့ တွေးလိုက်တယ် )
မိုးကုတ်က တရုတ်ဆိုင်မှာ စားခဲ့တဲ့ ကြက်ကြော် မမေ့လောက်ဘူး တော်တော် စားကောင်းတယ်။
ကြက်ကို အတုံးလေးတွေ တုံးပြီး ကြွပ်နေအောင် ကြော်ထားတာ.. မွလွန်းလို့ အရိုးတောင် ၀ါးစားလို့ ညက်တယ်။
စားဖို့ မှာရင်တော်တော် စောင့်ရတယ်။
ဟင်းးးးးးးးး နော်။ ချက်နည်းတွေလည်း မပါ။ ဘယ်မှာရမှန်းလဲ မသိ။ သဂျီးအလှူရွာသားကောင်းမှုဆိုတော့ အဝပဲ ဆွဲရတော့မလို။
Let me know how to cook. Don’t do like that here.
Sorry ပါပဲဗျာ…အမှန်တော့ ပိုစ့်မှာတင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး… ဖိုရမ်ထဲမှာတင်ဖို့ပါ…စာစီပီး ဟင်းချက်နည်းကိုပါထည့်ပေးဖို့ပါပဲ.နေရာကတော့ Taman Desa,Kuala Lumpur,Malaysia မှာရှိတဲ့ကျွန်တော့ ဆိုင်မှာပါ. .ကြော်ငြာခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ….
၁။ဘန်ကောက်ထမင်းကြော်….. ထမင်းကိုတစ်ယောက်စာအနေတော်ထည့်ပါ.. ဆားအနည်းငယ်၊ အချိုမှုန်ုအနည်းငယ်၊ငရုပ်ကောင်းအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ပြီးလျှင် ကြက်သွန်နီပါးပါးလျီးထားသည်ကို ဆီသပ်ပါ။ အနည်းငယ် အညိုရောင်သန်းလျှင် ပဲသီးပါးပါးလျီးထားသည်ကိုထည့်ပါ ၊နောက်ထမင်းထည့်၍ကြော်ပါ… မီးကင်ထားသောငါးပိအနည်းငယ်ထည့်လျှင်ပို၍ကောင်းပါသည်။ထမင်းကြော်ပြီးလျှင် ဇလုံအသေး(ဟင်းချိုသောက်ဇလုံ)နှင့်ထည့်ပါ ။ပြီးလျှင်ပုံစံခွက်(ဆီထည့်သော ကတော့)ဖြင့်ပုံပါတိုင်းပြင်စင်ပါ၊
၂။ကြက်သားကို အတုံးလေးတွေတုံးပါ၊ကြက်ဥအနှစ်အနည်းငယ်၊ ဆားအနည်းငယ်၊အချိုမှုန့်အနည်းငယ်၊ငရုပ်ကောင်းအနည်း၊ ဆီမွှေးအနည်းငယ်ထည့်ပြီးသမအောင်နည်ပါ ။ပြီးလျှင် ကော်မှုန့်(သို့)အကြော်မှုန့်နှင့်နည်ပါ။ ထိုနောက် ဆီပူထဲမှာထည့်၍ကြော်ပါ၊ပြီးလျှင် ဆီစစ်ပြီးသပ်သပ်ဖယ်ထားပါ၊
၃။ဆောစ့် ချက်ရန်အတွက်. .ကြက်သွန်နီအနည်းငယ်ပါးပါးလှီးထားပါ၊ဂျင်းအနည်းငယ်နှင့် ဆီအနည်းငယ်ထည့်၍ဆီသပ်ပါ ၊ပြီးလျှင် ခရုဆီအနည်းငယ်၊ ပဲငံပြာရည်အနည်းငယ်၊ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ၊ ဆူလျှင် ကော်ရည်အနည်းငယ်ထည့်ပါ၊ဟင်းချက်ဝိုင်ရှိလျှင်ထည့်ပါ၊ဆောစ့်ပျစ်သွားလျှင် ပဲငံပြာရည်အနောက်ရည် အနည်းငယ်ထည့်ပါ ၊နှမ်းဆီအနည်းငယ်ထည့်ပါ၊ ငရုပ်ကောင်းအနည်းငယ်ထည့်ပြီးလျှင် ပုံတွင်ပြင်ထားသည့်အတိုင်း ဆလပ်ရွက်ကလေးပေါ်မှာ ကြော်ပီးသား ကြက်သားကို ထည့်ပါ၊အပေါ်မှ ဆောစ့်လောင်းထည့်ပါ၊ မုံလာဥနီကိုအချောင်းလေးတွေလှီးပါ၊သခွါးသီးကိုလည်း အချောင်းလေးတွေလှီးပါ၊ ပုံပါအတိုင်း ထမင်းကြော်ဘေးပတ်လည်မှာ လှလှလေးဖြစ်အောင် စီစီရည်ရည်လေးပြင်လိုက်လျှင် စားချင်စဖွယ် ဘန်ကောက် ထမင်းကြော်ကိုသုံးဆောင်နှိင်ပါပြီ။
ကြက်သားကို အရိုးထုတ်ြပီးသား ရင်အုံသား(သို့)ပေါင်သား ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုအသုံးနိုင်ပါတယ်၊ကြွပ်ပီး မွမွလေးနေအောင် အသားကို ကော်မှုန့်နဲ့နည်ပီး ဆီပူပူမှာထည့်ကြော်ပါ။
အိမ်က မိန်းမ ကို ချက်ခိုင်းရမယ်
ရသာတဏှာ…။ ရသာတဏှာ….။ ဟင်း……ကြည့်ရင်းနဲ့ seaRUM ကို သတိရလာပေါ့……..။
ဆိုင်နာမည် ပြောပြပါလား အဘန်း ဆာရာမောက်မကန်း ….. ကျွန်တော်စားဘူးတာတော့ ပုဇွန်အကောင်ကြီးကြီးနဲ့ဗျ ယိုးဒယားမှာ ထမင်းကျော် ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ရှိလဲမသိဘူးနော်.. သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျ…..
ဆကားလန်း အ၀ ဒီမာန အကု ကဒိုင် ဒီ တာမန် ဒယ်ဆာ ကေလယ်…နာစီ ဂိုးဒင်း အါဒ ဘာည နာမာ….ကာဝမ်း တညင်သား တာရီ မာကာဆေး ဘာည ဘာည….